> Resource > Memory Card > XD Card Recovery inuu ka soo kabsado Khasaaray Xogta laga XD Card
"Waxaan u tegey adeega qaranka la camera aan. Kaarka XD ahaa 2GB. Anna waxaan soo qaaday in ka badan 500 photos, laakiinse maalinta la soo dhaafay oo dhan ugu danbeeyay 400 photos baxeen! Ahayd in aan qaato sawir wakhtigaas, ka dibna ayaan u tegey loo maqli ah shaqo, oo dhan photos dhawaan waxaan soo qaatay baxeen! Sidee baan u samayn karaa XD kabashada kaarka sawirka dib u soo ceshano photos lumay kaarka sawirka XD? "
Khasaaraha sawir noocan oo kale ah oo ku saabsan kaarka sawirka XD waa in aanay noqon dhif. Waxaad dhici kara dhibaatooyin la mid qasan ama kuwa kale. Tusaale ahaan sawiro Wixii laga yaabaa inay tirtirmaan sababo aan la ogeyn halka uploading ka kaarka sawirka XD in PC, ama lumaan ay sabab u tahay takhalusid shil ah, formatting. Inkastoo marar kale qaar ka mid ah kaarka XD sawirka noqdo geli karin siyaabo qalad card, Baadi qaab oo muujinaysa ma bytes. Waa qaracan badan laakiin nasiib wanaag waxaa jira hab lagu sameeyo dib u soo kabashada kaarka sawirka XD ay shardi tahay in kaarka la jidh ahaan aan burburin oo photos aan overwritten.
Waa maxay sababtu? Sharaxaad waa mid fudud. Marka aad si qalad ah u tirtirto, qaab card XD sawirka, ama kaadhka laftiisa ayaa baadi card iyo u baahan tahay in qaab, xogta aan weligood laga badiyay. Xogta ayaa weli badbaadiyey ku qeybaha kala duwan ee kaarka sawirka XD. Haddii kaarka la kulmay dhaawac jireed ama aad sii gelinaya files dheeraad ah, waxaa suuro gal ah ee sawir khasaaro joogto ah.
Sida loo soo ceshano photos lumay kaarka sawirka XD la soo kabashada card XD
Iyadoo XD software kabashada kaarka, waxaad si fudud oo si guul ah soo kaban karto sawiro lumay ka kaarka sawirka XD aad iskaa. Connect kaarka sawirka XD in kombiyuutar barnaamijka soo kabashada sawir sida lagu rakibay, ka dibna u qabtaan soo kabashada.
Haddii aad isticmaalayso computer la Windows OS, isku day Wondershare Photo Recovery .
Haddii aad isticmaalayso computer la Mac OS X, ka dibna u leexdo xagga Wondershare Photo Recovery for Mac .
Sawiro ka sokow, labada Windows iyo Mac salaysan kabashada software sawir ceshano karaa videos lumay iyo files music. Kuwa soo socda waa hage ah tallaabo-tallaabo ku saabsan sida loo soo ceshano photos lumay kaarka XD la Wondershare Photo Recovery (guul). Tallaabooyinka inuu ka soo kabsado sawir ee Mac mid yihiin ilaa xad.
Ka hor inta aadan bilaabin, marka hore xirmaan kaarka sawirka XD in computer ka dibna dooro qalab lagu kaydiyo diirada (sida caadiga ah digsi G, waayo, ama H :). Fadlan dooro mid ka mid ah afar siyaabood si loo hubiyo in XD kaarka aad rabto in aad iskaan waa wanaagsan ugu xidhan.
Step1: Dooro qalab bartilmaameed, ka dibna bilowdo nidaamka iskaanka ah.
Liiska qoruhu helay on drive ama warbaahinta kaydinta kale helay software kabashada sawirka lagu soo bandhigi doonaa. Dooro mid ka mid ah in aad files lumay ku yaal. Riix ' Scan 'si ay u bilaabaan iskaanka for files.
Talooyin: markii iskaanka waxay ku xiran tahay oo dib u soo kabashada hab la doorto.
Waxaad ku xasil karaa ama joojin karaa scan ee bartamaha habka-. Si aad natiijo wanaagsan, waa in aad u ogolaato sawirka si aad u dhamayso.
Waxaad fursad u badbaadin natiijada hore scan u soo kabashada sawir joogto ah mar kasta oo aan rescanning leeyihiin.
Step2: Ogow faylasha aad u baahan tahay.
Ogow xogta diirada in aad rabto in aad soo kaban ah. Riix ' Ladnaansho 'in la sii wado in interface doorashada caga. Ama guji Back inuu ku soo laabto interface doorashada Risaalo.
Waxaad ku eegaan karo sanamyadiinna ka hor soo kabashada.
Natiijada scan ayaa la soo daabici doonaa sida ay qaabab file.
Step3: Dooro meel si loo badbaadiyo macluumaadka recoverable.
Dooro ama geli tusaha in uu kaydiyo faylasha soo kabsaday.
Waxaan aad kuu soo jeedinaynaa inaad dooro hagaha kale oo ka duwan yahay isha mid, haddii ay dhacdo waxaa ugu danbeyn overwrite lahaa xog isha.
Talooyin: dib sawiro aad si joogto ah si loo yareeyo khatarta ka mid ah sawir khasaaro. Si fudud Ha isku hallaynina card XD sawirka, kaadhka xusuusta capacious, ama qalab kale oo lagu kaydiyo. Shilal ayaa ka dhici karaan qalab kasta wakhti kasta. Sidaas dib-up waa habka ugu fiican oo si sahlan loo sameeyo dib u soo kabashada kaarka sawirka XD iyo kaararka kale xusuusta digital.
Video tutorial ah XD kabashada sawir card